ဆိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ ဘာလို့ customer loyalty ကိုလုပ်သင့်တာလဲ? Customer loyalty ကနေရောဘာတွေရနိုင်မှာလဲ?? - Piti
ဆိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ ဘာလို့ customer loyalty ကိုလုပ်သင့်တာလဲ? Customer loyalty ကနေရောဘာတွေရနိုင်မှာလဲ??
By phyu su htwe
Customer အသစ်ရှာဖွေရရှိနိုင်ခြင်း နှင့် ရှိပြီးသားcustomerကိုထိန်းထားနိုင်ခြင်း
Cross/ Up Selling လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းများရရှိခြင်း
ဆိုင်ရဲ့Brand Image ကိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း
ပြိုင်ဘက်ဆိုင်တွေ အကြား မှာ ထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည် နေနိုင်ခြင်း
Customerအသစ်ရှာခြင်းဟာ အရေးကြီးသလို ရှိပြီးသား customerတွေကို ထိန်းထားခြင်းဟာလဲ ဆိုင်ရဲ့အရေးပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါပဲ။ Customer အသစ်ရှာခြင်းဟာ ရှိပြီးသား customer ကိုထိန်းသိမ်းတာထက် ကုန်ကျစရိတ် ၅ ဆ လောက်များပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ့်ဆိုင်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ customerတစ်ယောက် ရဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ရတဲ့ marketing ကုန်ကျစရိတ်ဟာ ကိုယ့်ဆိုင်မှာ ရှိပြီးသား customerကို နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လာဝယ်အောင် လုပ်ရတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ထက် ပိုမိုကုန်ကျပါတယ်။ ရှိပြီးသား customerတွေဟာ ကိုယ့်ဆိုင်မှာ လာဝယ်နှုန်းများလာပီဆိုရင် ကိုယ့်ဆိုင်ရဲ့ အကျိုးအမြတ်ဟာလဲ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းထိကို တတ်လာနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာချက်များအရ လုပ်ငန်းတော်တော်များများဟာ သူတို့ရဲ့အကျိုးအမြတ် ထက်ဝက်ကျော်ဟာ customer အသစ်ထက်သူတို့ရဲ့ ရှိပြီးသား customer တွေ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်လာဝယ်ခြင်းမှ ရရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။
Loyal customer တွေဟာ customer အသစ်တွေထက်သူတို့ဝယ်နေကျဆိုင်မှာပဲ အမြဲတမ်း ခဏခဏ ဝယ်ယူတာကို ပိုပြီး သဘောကျ ကြိုက်နှစ်သက်ကျပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူတို့လိုအပ်တဲ့product တွေအပြင် သင့်ဆိုင်ရဲ့ အခြားproductတွေကိုပါ Loyal customer တွေဟာ customer အသစ် တွေထက် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုပြီးတော့သုံးစွဲဖို့စိတ်ဆန္ဒရှိကြပါတယ်။
Customer အဟောင်းတွေက customer အသစ်တွေထက်ကို ၃၀ရာခိုင်နှုန်းပိုပြီးတော့ကို သင့်ဆိုင်က product တွေကို ဝယ်ယူသုံးစွဲကြပါတယ်။
Customer Loyalty ဟာဆိုင်တစ်ဆိုင်အတွက်ရေးပါတဲ့ Customerအသစ်ရှာဖွေခြင်းကိုရော၊ ရှိပြီးသားcustomerတွေကိုထိန်းထားပေးခြင်းကိုရောနှစ်ခုစလုံးကိုပါလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်၊
Cross Selling နဲ့ Up Selling ဆိုတာဘာလဲ?? အရိုးရှင်းဆုံးအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် Cross Selling ဆိုတာကတော့ customer တွေကို လက်ရှိ သူတို့သုံးစွဲနေတဲ့ productတွေနဲ့ ပတ်သတ် သက်ဆိုင်တဲ့ တခြားသော productတွေကို ရောင်းချတာကို ပြောတာပါ။ ဥပမာအနေနဲ့ သင့် customer ဟာ ယခုလက်ရှိ သင့်ဆိုင်ကနေ ဖုန်းတစ်လုံး ဝယ်ယူထားတယ် ဆိုပါတော့ ဒါဆိုရင် သင်ဟာ သင့်customer ကို cross selling လုပ်မယ်ဆိုရင် ဖုန်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အားသွင်းကြိုး၊ power Bank၊ ဖုန်းကာဗာ အစရှိတဲ့ product တွေကို ရောင်းလို့ ရပါတယ်။ Up Selling ဆိုတာကတော့ customer တွေကို လက်ရှိ သူတို့သုံးစွဲနေတဲ့ product တွေထက် ပိုကောင်း ပိုတန်ဖိုးကြီးတဲ့ product တွေကို တိုးမြှင့် ရောင်းချခြင်းကို ပြောတာပါ။ ဥပမာ customer ကသင့်ဆိုင်ကနေပုံမှန် ၅၀၀၀၀ တန်မိတ်ကပ် product ကို ဝယ်သုံးနေတယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ သင့်customerကို သူသုံးနေကျ productထက် ပိုကောင်းပြီး ပိုတန်ဖိုးများတဲ့ product ကိုသုံးဖို့ပြောခြင်း ၊ ရောင်းချခြင်းကို Up selling လုပ်ခြင်း လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Loyal Customer တွေဟာ သင့်ဆိုင်၊ သင့်လုပ်ငန်းနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေး ရှိပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူ့အနေနဲ့ သင့်ဆိုင်အပေါ်မှာ customer အသစ်တစ်ယောက်ထက် ပိုပြီး ယုံကြည်မှု ရှိပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ သင့်ဆိုင်အနေနဲ့ Loyal customer တစ်ယောက်ကို သင့်ဆိုင်ရဲ့ productတွေနဲ့ service တွေကို cross/up selling လုပ်ဖို့အတွက် အခွင့်အရေး တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Cross/Up selling လုပ်ခြင်းအားဖြင့် customer အသစ်တစ်ယောက် ရှာစရာမလိုဘဲ သင့်ဆိုင်ရဲ့ရောင်းအားကိုမြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။
အခုခေတ်မှာ customer တော်တော်များများဟာ ကြော်ငြာတွေထက် သူငယ်ချင်းတွေ မိတ်ဆွေတွေ ဆီကနေ ပြန်ကြားရတဲ့ feedback တွေကို ပိုပြီး ယုံကြည် နေကြပါပြီ။ ယနေ့ digitalခေတ်မှာ တစ်ဆင့်စကား (word of mouth) ဟာအကောင်းဆုံး marketing တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ customerတွေဟာ တစ်ဆင့်စကား (word of mouth) ကို အယုံကြည်ရဆုံး ကြော်ငြာ တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ် နေကြပါပီ။ Customer တစ်ယောက်ရဲ့ တစ်ဆင့်စကား (Word of Mouth ) ဟာ ဆိုင်တစ်ဆိုင် အတွက် အရေးကြီးဆုံး marketing တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Marketing မှာတော့သင့်ရဲ့ Loyal customer တွေဟာ အ‌ရေးကြီးဆုံးသော အစိတ်အပိုင်းမှာ ပါဝင်ပတ်သတ် နေပါပီ။ သင့်ရဲ့ loyal customer တွေဟာ သင့်ဆိုင်နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေနဲ့ ယုံကြည်မှု ရရှိထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် သင့်ဆိုင် ကနေရတဲ့ သူ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ၊ သင့်ဆိုင်နဲ့သင့်ဆိုင်ရဲ့ product အကြောင်းတွေကို သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်၊ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေနဲ့ မိသားစုတွေ ကိုပြန်ပြောပြခြင်း ၊ သူ့ရဲ့ social media ပေါ်မှာ ရေးတင်ခြင်း တွေဟာ သင့်ဆိုင် အတွက် အကောင်းဆုံးသော ကြော်ငြာ တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကြော်ငြာဟာ သင့်ဆိုင်အတွက် customer အသစ်ကို သင့်ဆိုင်ကို‌ ရောက်လာစေမှာ အသေအချာပါပဲ။ အခုဆိုရင် customer တွေဟာ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ဈေးမဝယ်ခင် သူတို့ဝယ်မယ့်ဆိုင်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ review တွေကို အရင် ရှာဖွေ ဖတ်ရှု ပီးမှသာ ဝယ်ယူကြတာပါ။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ Loyalty Program လုပ်ခြင်းအားဖြင့် Marketing စရိတ် ကို လျော့ချနိုင်ပြီး customer အသစ်တွေကို သင့်ဆိုင်ဆီသို့ ရောက်လာအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Brand Image ဆိုတာက သင့်ဆိုင်ရဲ့ productတွေ ၊ serviceတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပီးတော့ customerတွေရဲ့ အထင်အမြင် ယူဆချက်တွေကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဆိုင်ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ positive imageက သင့်ဆိုင်ရဲ့ customer အသစ်ရှာဖွေခြင်းတွေ၊ cross/up selling လုပ်ခြင်းတွေ၊ marketing အတွက် အသုံးစရိတ် လျှော့ချခြင်း တွေကိုလဲ အများကြီး ထောက်ပံ့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ Brand imageဆိုတာ သင့်လုပ်ငန်း၊ သင့်ဆိုင်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိသော ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ customer တွေက စျေးဝယ်ယူမှု မပြုလုပ်ခင်မှာ သူတို့လိုချင်တဲ့ အရာတွေကို ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရဲ့ brand imageကို အရင်လေ့လာပြီးမှ ဝယ်သင့်မဝယ်သင့် ဆုံးဖြတ်ကြတာပါ။ ဥပမာအားဖြင့် သင့်ဆိုင်ရဲ့ productတွေက အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ရဲ့လား? ၊ တကယ်လို့ online shop ဆိုရင်လဲ ငွေကြိုပေးလို့ ယုံကြည်ရရဲ့လား? အစရှိတာတွေကို သင့်ဆိုင်ရဲ့ brand imageကို ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ သင့်ဆိုင်မှာ လာရောက် ဝယ်ယူကြတာပါ။
တစ်ခုသိထားသင့်တာက Brand image နဲ့ customer Loyalty နှစ်ခုဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အပြန်အလှန် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနေတာပါပဲ။ Customer Loyalty ကသင့်ဆိုင်ရဲ့ brand image ကိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ပေးသလို သင့်ဆိုင်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ brand imageဟာ သင့်ဆိုင်ကို customer တွေအမြဲလာဝယ်အောင်လဲ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဆိုင်ရဲ့ brand image ကိုသ‌ဘောကျ ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး သင့်ဆိုင်ရဲ့ brand imageကို ယုံကြည် စိတ်ချတဲ့ သင့်ရဲ့ loyal customer တွေဟာ customer အသစ်တွေထက် သူတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ပိုပြီး တစ်ခြားသူတွေကို မျှဝေပေးနိုင် ကြပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ဆိုင်ရဲ့ brand image ဟာလဲ တခြားသူတွေ ကြားမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ brand တစ်ခု အနေနဲ့ ရောက်ရှိပြီး သင့်ဆိုင်ကို လာရောက် ဝယ်ယူကြမှာ အသေအချာပါပဲ။ customer တွေ အမြဲလာအားပေးနေပြီ ဆိုရင်တော့ သင့်ဆိုင်ရဲ့ customer Loyalty ဟာလဲ တိုးတက်လာမှာ အသေအချာပါပဲ။
ပြိုင်ဘက်ဆိုင်တွေ အကြားထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည် နေနိုင်ခြင်း
အခုခေတ်မှာ စျေးကွက်စီးပွားရေးဟာ အပြိုင်အဆိုင်ကို ဖြစ်လာ ကြပါပြီ။ အခုလိုခေတ်ကြီးမှာ သင့်ဆိုင်နဲ့ သင့်ဆိုင်ရဲ့ product တွေဟာ သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ မတူ ကွဲပြားအောင် လုပ်ဖို့ဆိုတာဟာလည်း မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒီနေ့မှာ သင့်ဆိုင်က အကောင်းဆုံနဲ့ အကျိုးအမြတ်အများဆုံး product ကို နောက်နေ့မှာ သင့်ရဲ့ ပြိုင်ဘက်ဟာ အလဲထိုးပစ်မဲ့ အခြေအနေကို အဆင်သင့် ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင့်ဆိုင်ရဲ့ Customer Loyalty Program က သင့်ဆိုင်ကို ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ မတူညီတဲ့အရာကို ပြုလုပ်ပေးထား ပြီးသားပါ။ Customer Loyalty ဟာ သင့်ဆိုင်နဲ့ ဆိုင်ရဲ့ product တွေကို ဝယ်ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ရာမှာ အများကြီး အထောက်အကူပြု ကူညီပေးပါတယ်။ သင့်ဆိုင်ရဲ့ ပြိုင်ဘက်မှာ သင့်ဆိုင်လိုမျိုး productတွေ service တွေရှိနေတယ်၊ ပေးနိုင်တယ် ဆိုရင်တောင်မှ သင့်ဆိုင်မှာ ပြိုင်ဘက်နဲ့ မတူညီတဲ့အကောင်းဆုံး Customer Loyalty ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် သင့်ဆိုင်ရဲ့ product နဲ့ service တွေကိုသာ တခြားဆိုင်တွေထက် ပိုပြီး customer တွေက ဦးစားပေးအနေနဲ့ ဝယ်ယူကြမှာပါ။
ဆိုင်ရဲ့ Loyal customer တွေဆီကနေ ဆိုင်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ရိုးသားပြီး မှန်ကန် ကောင်းမွန်တဲ့ feedback (တုံ့ပြန်ချက် )တွေကို ရရှိခြင်းဟာလဲ customer loyalty program ရဲ့ အကျိုးရလဒ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်း တော်တော်များများဟာ သူတို့customer တွေကို ကောင်းမွန်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ရရှိအောင် လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ကို customer တွေဆီကနေရတဲ့ feedback တွေကိုသာ အသုံးပြုကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ customer တွေရဲ့ feedback တွေဟာ ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ အသုံးဝင်ပါသလဲ?
ဆိုင်ရဲ့ product တွေ service တွေ ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း
ဆိုင်ရဲ့ product အသစ်စတင်ခြင်း
ဆိုင်ရဲ့ customer တွေအဆင်ပြေမှုရှိမရှိ ၊ စိတ်ကျေနပ်မှု ရှိမရှိတွေကို တိုင်းတာခြင်း
ဆိုင်အတွက်အကောင်းဆုံးသော ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချမှတ်ခြင်း တွေမှာ အများကြီး အထောက်အကူပြု ကူညီပေးပါတယ်။
Customer Loyalty ကနေ ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေဟာ ဆိုင်အတွက် အများကြီး အထောက်အကူ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဆိုင်မှာ Loyal customer တွေနဲ့ Customer Loyalty တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပြီး ဆိုင်ရဲ့ရောင်းအားကို မြှင့်တင်ကြရအောင်။
Beyond the first purchase
Packaging နဲ့ Customer Loyalty